5 zvirimwa zvakarembera kuwedzera ruvara kumahwindo nemabhakoni | Bezzia
5 zvirimwa zvinorembera kuwedzera ruvara kumahwindo nemabhakoni
Maria vazquez | 14/06/2022 12:00 | Musha
Isa zvirimwa zvinorembera mumahwindo Iyo inoshandura zvachose ma facades. Zvinounza ruvara uye mufaro uye zvinoita kuti zvive zvakanyanya kunaka. Vanoda kuzvipira, asi ndiani asingafarire kufungisisa iwo mabhakoni akazara nemaruva paanenge achishanyira geography yedu panguva ino yegore?
Kune zvakawanda zvinomera zvatinogona kupenya nazvo mavharanda edu kubva muchirimo kusvika pakudonha. Zvisinei, pakati kurembera mbeu takawana zvimwe zvataida. Zvirimwa nemaruva ane mavara akajeka anoda kutarisirwa kwakasiyana.
Surfinia inonyanyozivikanwa chirimwa chekunze nekuda kwekurima kwayo kuri nyore. Ivo ndevemhuri yeSolanaceae vanobva kuSouth America uye ndeimwe yemhando dzakasimba dzepetunias. Hunhu hwekurembera kwavo kuvepo maruva akaumbwa maruva iyo inogona kuva nemavara akasiyana pamwe chete nezvose zvakatsetseka uye wavy edges.
Chirimwa ichi chinokura muzvikwata uye chiri yakanakira kukura muhari nemaplanter. Uko kunopisa zvikuru muzhizha, zviri nani kuaisa mumumvuri, uchivavimbisa nguva shoma yemaawa matanhatu ezuva pazuva, kunyanya mangwanani. Zviri nyore kana uchidyara kuti uwedzere kunonoka-kuburitsa fetireza yezvinomera maruva kune substrate uye muna Chikunguru, mushure mekutumbuka kwavo kwekutanga, ita kuchekerera kwakarebesa kweakareba madzinde (kwete kupfuura 20%) kuchengetedza chimiro chavo.
Calibrachoa imhando yezvinomera zvisingaperi zve mhuri imwe chete nemasurfinias iyo inobereka, kubva muchirimo kusvika pakupera kwezhizha, maruva maduku akaita sebhero. Kukura kwayo tsika inokambaira uye naizvozvo matavi ayo nemaruva zvinorembera kana zvakasimwa muhari kana tswanda pakureba.
Calibrachoa chirimwa chine hurefu husingadarike masendimita makumi maviri. maruva ayo maduku asi maruva ayo akawanda uye akawanda kana akagamuchira maawa anodiwa ezuva. Kufanana nemasurfinias, chakanakira ndechekuti inogamuchira zuva iri mangwanani uye inogara mumumvuri-munguva yemasikati.
Vapei mvura yakanaka; Zvose zvakawandisa uye kushaya mvura zvinogona kukuvadza. Y sunga madzinde pKuti uwane mamwe compact bush uye nekukura kukuru. Pakati pemarudzi akawanda, 'Million Bells' Calibrachoas ndeimwe yemaruva akawanda kwazvo.
Iyo ivy kana gitanilla geranium ndeimwe yemhando dzinonyanya kufarirwa kupendesa mahwindo nemabhakoni. Icho chirimwa chakasimba kwazvo, iyo inochengetedza maruva ayo kusvika panguva yechando kana ikapiwa maawa akakwana ezuva rakananga. Vanogona kuiswa muzuva rakazara asi zvingave zviri nyore kuzviita muhafu-mumvuri. Dzinoshingirira tembiricha dzinosvika 30º asi kwete tembiricha dziri pasi pe5 degrees pasina dziviriro.
Muchirimo uye zhizha unofanirwa kudiridza geraniums nguva zhinji, uchichenjerera nekudonha kwemvura. Munguva ino, mukuwedzera, zvichave nyore kubatanidza zvimwe fetereza yezvirimwa zvinotumbuka rimwe nerimwe mazuva gumi nemashanu.
Hwindo rako rinogamuchira maawa mashoma ezuva here? Fuchsias ndeimwe yeashoma maruva anorembera zvirimwa zvaunogona kuisa muhari uye mumumvuri. Vachada, hungu, maawa mashoma ezuva kuti vabudirire. Zvitatu zvinogona kukwana. Fuchsias inotsigirawo chando. Kana chando chasvika vanorasikirwa nemashizha nemaruva, asi vanozobuda zvakare muchirimo.
Mamwe marudzi efuchsias ane bushy uye anokura akatwasuka, asi iwe zvakare uchawana mamwe akarembera. Iyo substrate payakasimwa inofanira kunge ine acidic zvishoma uye ine porous kuti ifambise mvura. Nezvekudiridza, izvi zvinofanira kuva zvakawanda munguva yemaruva, kuitira kuti ivhu rinoramba rakanyorova (kwete mvura).
aphtemia a zvinokambaira zvinonaka uye kukurumidza kusimudzira kwakazvarwa muAfrica. Mashizha ayo akasvibira uye ane nyama uye inflorescences ayo anowanzo pink, kunyangwe zvichikwanisika kuwana tsvuku kana chena mhando. Inowanza zviri nyore; ingocheka chidimbu chechirimwa wochinamira muvhu.
Icho chirimwa chinoda chiedza chakawanda, kunyange zvazvo chinoshivirira nzvimbo dzine mumvuri. tsungirira kusanaya kwemvura, kunyangwe ichatumbuka zvirinani nekudiridza kwakawanda uye kwenguva dzose kana ikapihwa mvura yakanaka. Haitsigire chando chinoramba ichinaya, asi inokwanisa kutsungirira tembiricha inosvika -5ºC. Zvichava zvakakwana kuti zvidzivirire munzvimbo dzinotonhora zvikuru nejira rinopisa munguva yechando kuti unakidzwe zvakare muchirimo.
Ndechipi chezvidyarwa izvi zvakarembera chaunonyanya kufarira kushongedza balcony yako?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Musha » 5 zvirimwa zvinorembera kuwedzera ruvara kumahwindo nemabhakoni
Traditional sobada kubva kuLa Rioja